Itoobiya oo sheegtay in saamiga laga siiyay dekedda Berbera ay wadahadal ka galeyso – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Itoobiya oo sheegtay in saamiga laga siiyay dekedda Berbera ay wadahadal ka galeyso
Dowladda Itoobiya ayaa la sheegayaa inay haatan saluugsan tahay saamiga dhawaan laga siiyay dekadda magaalada Berbera ee maamulka Somaliland, iyadoo ay dooneyso inay arrinkaasi wadahadal ka furto.
Wasiirka gaadiidka dalka Itoobiya Axmed Shidde ayaa sheegay in Itoobiya ay dooneyso inay wadahadalo dheeraad ah ka gasho saamiga laga siiyay dekadda magaalada Berbera oo maamulkeeda ay la wareegtay shirkadda DP World ee Imaaraadka Carabta.
Axmed Shidde ayaa hadalkaasi ka sheegay xilli uu ka qeyb-galayay furitaanka dekadda Tojarra ee dalka Jabuuti, wuxuuna tilmaamay in Itoobiya ay maalgashi iyo adeegsi ka damacsan tahay dekadda magaalada Berbera, ayna wadahadal la geli doonto shirkadda DP World.
Heshiis ay wada-saxiixdeen shirkadda DP World iyo maamulka Somaliland ayaa lagu shaaciyay in saamiga kasoo xarooda dekedda magaalada Berbera 19% ay leedahay Itoobiya, balse waxaa muuqata in Itoobiya ay haatan dooneyso saami ka badan kii loo qoondeeyay.
Illaa iyo haatan lama oga sababta keentay in Itoobiya ay qeyb uga noqoto heshiiska ay shirkadda DP World kula wareegtay dekedda Berbera, iyadoona madaxda Somaliland ay sheegeen in qeybtii DP World ay Itoobiya wax ka siisay.